तपाईंको यो साता भर कस्तो रहला ? हेर्नुहोस जेठ २५ गते आज आइतबारदेखि ३१ गतेसम्मकाे साप्ताहिक राशिफल – Butwal Sandesh
तपाईंको यो साता भर कस्तो रहला ? हेर्नुहोस जेठ २५ गते आज आइतबारदेखि ३१ गतेसम्मकाे साप्ताहिक राशिफल
मेष– घरायसी काममा बढी ख*र्च हुनेछ । यात्रामा सामान हराउन सक्ने तथा सामान्य क्ष’ति हुन सक्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या हुने तथा परिवारमा म*नमु’टाव बढ्नेछ । साताको मध्यमा भने नयाँ मित्रसँग भेटघाट हुने तथा वैदेशिक सहायता मिल्ने एवं मनोरञ्जनमा बढी स*मय बित्नेछ । साताको अन्त्यमा भने सानो यात्रा हुने एवं आफन्तसँगको भेटघाटमा भोज*नको सुख मिल्ने एवं धनसम्पत्तिको वृद्धि हुने तथा लगानीमा राम्रो प्रतिफल आउनेछ।
वृष– व्यवसायमा बाधा आउनेछ । आर्थिक कारोबार मा समस्या हुनाले पुरानो व्यवहारमा त*नाव हुनेछ । ऋ’णको भार कम हुने तथा सन्तानबाट आर्थिक सहयोग मिल्नेछ । साताको मध्यमा भने अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखिने एवं यात्रामा झन्झ’ट आउनेछ । खर्च बढ्ने तथा आँटेको काममा अड्च*न आउनेछ । साताको अन्त्यमा भने स्वास्थ्यमा सुधार हुने एवं आफन्तसँग भेटघाट मिल्नेछ । वैदेशिक सहायताको योग बन्ने तथा साझेदारी लगानीमा नयाँ योजना सुरु हुनेछ।
मिथुन– व्यवसायमा सामान्य आम्दानी हुनेछ । सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रतिर व्यस्तता बढ्ने तथा पदीय प्रशंसा मिल्नेछ । लगानीमा सामान्य फाइदा हुनाले आर्थिक भार कम हुनेछ । काममा चि*न्ता मिल्ने तथा कृषि व्यवसायमा भने आम्दानी हुनेछ । आफन्त भेटघाट एवं यात्रामा त’नाव मिल्नेछ । पारिवारिक सहयोग मिल्नाले पुराना काम बन्नेछन् । प्रेममा प्रगति एवं वैवाहिक जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्ति हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने वि’वादमा परिन सकिने, खर्चले तना*व हुने एवं यात्रामा सामान्य झन्झ’ट हुन सक्नेछ।
कर्कट– धार्मिक काममा खर्च हुनेछ । मित्रको सुख मिल्ने एवं पारिवारिक भेट*घाट रहनेछ । सन्तानको सुख मिल्ने एवं वैदेशिक सहायता आउनेछ । विदेशबाट धन एवं आफन्तजनको सहयोगमा कामको योजना बन्नेछ । खानपिन एवं सुखसयलमा खर्च बढ्ने तथा वि*लासितामा सामान्य खर्च हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा भने सामान्य प्रगति देखिन्छ।
सिंह– साताको सुरुमा सामान्य स्वास्थ्य बा*धा हुनेछ । काममा ढिलासुस्ती एवं आफन्तजनसँग म*नमु’टाव रहन सक्नेछ । साताको मध्यमा भने पुराना काम पूरा हुने एवं सामाजिक खर्च हुनेछ । काममा प्रगति देखिने तथा राजनीतिक क्षेत्रमा अवसर मिल्न सक्नेछ । पदीय सुख मिल्ने एवं काममा प्रशंसा हुनेछ । स्वास्थ्यमा भने सामान्य गडबडी एवं सञ्चित धन खर्च हुने देखिन्छ । मानसिक तनाव बढ्नाले काममा वा*धा हुनेछ।
कन्या– साझेदारी लगानीमा वि*वाद हुनेछ । प्रेममा प्रगति मिल्ने तथा आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ । खानपीनको कारणले स्वास्थ्यमा बा*धा एवं पारिवारिक स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । साताको मध्यमा भने व्यवसायमा झ,मेला आउन सक्ने तथा झू’ठो आ*रोपको सामना गर्नुपर्नेछ । साताको अन्त्यमा भने काममा प्रगति देखिने एवं व्यक्तिगत खर्च बढ्नेछ।
तुला– व्यवसायिक काममा रुचि बढ्नेछ । जिम्मेवारी थपिने एवं ठूलाबडाको साथ भने मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा बा*धा हुने तथा सम्पतिको चि*न्ता हुनेछ । परिवारसँगको रमाइलोमा दिन बित्ने एवं वैवाहिक जीवनमा प्रेमको वृद्धि हुनेछ । छोटो यात्रा हुने तथा व्यवसायमा सन्तुष्टि मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने स्वास्थ्यमा गड*बडी एवं आफन्तजनसँग सामान्य वैरभाव रहनेछ । यात्रामा जो*गिनुपर्ने तथा अनावश्यक झन्झ’टले काम लम्बिने देखिन्छ।
वृश्चिक– अध्ययन एवं कला, संगीतमा रुचि जानेछ । धार्मिक एवं आध्या*त्मिक क्षेत्रमा संलग्नता बढ्ने तथा व्यापार व्यावसायमा भने केही आम्दानी हुनेछ । सन्तानको सहयोगले अधुरा काममा प्रगति देखिन्छ । सामान्य वादवि’वाद पर्न सक्ने एवं घरायसी वि*वाद भने बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा भने दौ’डधु*प धेरै एवं सरकारी जिम्मेवारी बढ्नाले व्यक्तिगत काममा बाधा पुग्नेछ । सन्चित धनको खर्च बढ्नाले त’ना*व थपिनेछ ।
धनु – चिसोले सताउनेछ । पारिवारिक चि*न्ताले सताउनेछ । आफन्तसँगको कारोबारमा केही अस*न्तुष्टि हुनेछ । महिलावर्गसँग दु’श्म*नी बढ्ने एवं घरायसी झैझ’ग*डा हुन सक्नेछ । साताको मध्यमा भने सवारी सुख मिल्ने एवं भोगविलासमा खर्च बढ्नेछ । साथी भाइले आर्थिक सहयोग गर्नेछन् तथा आफन्तबाट आश्वासन मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने खेलकुदमा रुचि जाने, घरबाहिरको काममा प्रगति देखिने तथा व्यक्तिगत कुरामा ख*र्च बढी हुनेछ।
मकर– उत्साह, उ*मंग बढ्नेछ । छोटो यात्राको अवसर मिल्ने एवं दाजुभाइको सहयोगले सा*मूहिक काम बन्नेछ ।दिदीबहिनी एवं बन्धुहरुबाट काममा प्रशंसा मिल्नेछ । साताको मध्यमा भने काममा बाधा आउने एवम आर्थिक रुपमा समस्या पर्ने तथा पारिवारिक सरसल्लाहमा कमी आउनेछ । साताको अन्त्यमा भने धनसम्पत्ति प्राप्ति हुने एवं जग्गा जमिनको कारोबारमा सुख मिल्नेछ । कृषि तथा पशु चौपायाबाट सा*मान्य आम्दानी हुनेछ।
कुम्भ– मीठो बचनको प्रयोगले सम्बन्ध राम्रो बन्नेछ । धनसम्पत्तिको कारोबारमा वृद्धि हुने, नयाँ काममा एवं स्वस्थ्यमा खर्च बढ्ने योग देखिन्छ । मिठो भोजनको सुख मिल्ने एवं परिवारसँगको भेटमा रमाइलो हुनेछ । साताको मध्यमा भने हिँडडुलले स्वास्थ्यमा समस्या दिने तथा अनावश्यक बो*झ आइपर्नेछ । दाजुभाइको सहयोगले काममा भने सजिलो हुनेछ । यात्रामा भने झन्झ*ट एवं व्यक्तिगत काममा बाधा पुग्नेछ । आफ्ना मान्छे सहयोग नदिँदा आँटेको काममा बाधा पुग्नेछ।
मीन– मनोरञ्जनमा खर्च हुनेछ । साथीभाइ भेटघाट बढ्ने एवं आफन्तसँग खानपिन तथा रमाइलोमा समय बित्नेछ । धनको कारोबारमा भने वृद्धि हुने तथा मित्रको सहयोग राम्रो हुनेछ । मिठो बोलीले का*म बन्ने तथा कुटुम्बसँग सहयोगको वातावरण बन्नेछ । मानसम्मानको योग बढ्ने तथा काममा प्रशंसा मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा भने सामान्य गडबडी एवं आफन्तसँगको कारो*बारमा सामान्य वि’वाद पर्नसक्नेछ।